Xijaar oo wali ka shaqeynaya hurinta colaadihii Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Xijaar oo wali ka shaqeynaya hurinta colaadihii Muqdisho
Hoggaanka Booliska Soomaaliya, ayaa mar kale muujiyay inuu ku daaban yahay xaafiska Farmaajo, waxaana socda duullaan qarsoodi ah oo ka dhan ah ciidankii dalka ka badbaadiyay inuu galo gacanta Kalitasika sharci darrada ku fadhiyada Madaxtooyada Qaranka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Keydmedia Online, ayaa heshay, waraaq lagu burinayo mid ka mid ah qodobadii ku qornaa heshiiskii Ciidamada Badbaado Qaran, looga saaray Muqdisho, taas oo ka soo baxday xaafiiska Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliya, Cabdi Xasan Maxamed ‘Xijaar’.
Waraaqda soo gaartay xaafiiska war-qadabdka KON, ayaa ku taariikheysan 2/5/2021, waxayna sumaddeedu tahay CIID/TIR/21768/21, isla-markaana waxaa ay ku socotay, Qaybta guud ee Booliska Gobolka Banaadir, Hoggaanka baarista danbiyada Booliska iyo Xeer ilaaliyaha Maxakamadda Ciidamada Qalabka Sida.
Waxaa waraaqda ka soo baxday Xaafiiska Xijaar, la ogaysiiyay Hoggaanka Maaliyadda Booliska, Hoggaanka Saadka Booliska, Hoggaanka Howlaha Booliska, Maxakamadda Ciidamada Qalabka Sida, Taliye ku xigeynka CBS, iyo Xog-hayaha guud ee CBS.
Ujeedada waraaqdaan waxaa lagu sheegay in ay tahay baafin iyo diyaaarinta iyo gal-dhacwadeed ka dhan ah ciidankii Badbaado qaran ee ka hor yimid muddo kordhintii uu samaystay Maxamed Cabdullahi Farmaajo, 12-kii bishii April.
Waxaa lagu xusay magacyada 15 Sargaal, oo ka tirsan qeybta guud ee Booliska Gobolka Banaadir, waxaana lagu eedeeyay in ay fasax la’aan ugu maqan yihiin fadhiyadii ay ka tirsanaayeen, isla markaana qaarkood ay la baxeen hubkii ay wateen.
“Hadaba waxaa la idin amrayaa in aad baadi goobtaan, haddii aad heshaanna aad ku soo sintaan fadhiyada ay ka tirsan yihiin, si looga qaado tallaabo waafaqsan Sharciga”, ayaa lagu yiri, waraaqda ka soo baxday xaafiiska taliya Ciidanka Booliska Somaaliya.
Xijaar, wuxuu waraaqda ku caddeeyay in 15-ka sargaal uu 1-dii May, ka joojiyay xuqaaqaadkii ay Dowladda ku lahaayeen, wuxuuna hoggaanka Baarista Danbiyada Booliska, ku amray in ay diyaariyaan, gal-dacwadeed, isla markaana uu u gudbiyo Xeer ilaaliyaha Maxakamadda Ciidamada Qalabka Sida, si loo hor geeyo Maxakamadda.
Inkastoo Cabdi Xasan Maxamed ‘Xijaar’ uu iska dhigayay shaqsi dhexdhexaad ah, raalli galinna uu ka bixiyay qaladaad laga tirsanayay hoggaankiisa, haddana arrinta uu wali ku baacsanayo ciidankii dalka ka badbaadiyay Kali-taliska ayaa meesha ka saari karta in lagu aamino amniga doorashooyinka.
Arrintaan, waxa ay sababi kartaa in ciidamadii Badbaado Qaran ee heshiiska looga saaray Caasimadda ay mar kale magaalada dib ugu soo laabtaan, taas oo ugu yaraan salfan karta dhamaan shaqsiyaadka hadda ku magacaaban xilalka waqtigooda dhamaaday qaarna uu gabagabada yahay.
Ciidamada dowlad goboleedka Puntland ayaa fuliyay howlgal ka dhan ah kooxda Al-Shabaab
Safiirkii Kenya oo soo gaaray Muqdisho
Warar 19 June 2021 16:54